Technology : Myanmar News Hub
သတင်းစကား ပေးပို့ခြင်းအတွက် ဝန်ဆောင်ခယူမည့် ဖေ့စ်ဘွတ်၏ အစီစဉ်သစ်
Posted by mmnewshub on April 10, 2013 · 8 Comments မဇ္ဈိမသတင်းဌာန. ၁၀ရက်နေ့ ဧပြီ ၂၀၁၃ —– ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း လူမှု ကွန်ယက်ဖြစ်သော ဖေ့စ်ဘွတ်(Facebook) သည် ၎င်းကို အသုံးပြုသူများ အကြား သတင်းစကား မက်ဆေ့ခ်ျ (massage) များပေးပို့သည့် ကဏ္ဍမှ အကျိုးအမြတ်ယူရန် စီစဉ်နေသည်။
Category Selected News, Technology · Tags google ကို မြန်မာဘာသာဖြင့် သုံးနိုင်ပြီ – ဦးသောင်းစုငြိမ်းနှင့် မေးမြန်းချက်
Posted by mmnewshub on April 4, 2013 · LeaveaComment DVB News, 4April 2013 —- ဒီနေ့ကစပြီး Google.com.mm ကို အသုံးပြုရင် မြန်မာလို ရေးသား ညွှန်ပြထားတာတွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာလိုရေးသားညွှန်ပြထားတာမို့ အင်္ဂလိပ်လို မ ကျွမ်းကျင်တဲ့ သူတွေလည်း အင်တာနက်ကို အလွယ်တကူ သုံးလို့ရနိုင်လာတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ အင်္ဂလိပ် လို ကနေ မြန်မာလို ဘာသာပြန် ဖော်ပြတာမျိုးလို ဘာသာပြန်ကိစ္စရပ်တွေလည်း ဖြစ်လာတော့မယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျုတာပညာရှင်များအသင်းရဲ့ အတွင်းရေးမှူး ဦးသောင်းစုငြိမ်းက ပြောပါတယ်။
Category Selected News, Technology · Tags ရန်ကုန်မှာ နိုင်ငံတကာ IT ကုမ္ပဏီ တခု လုပ်ငန်း စတင်
Posted by mmnewshub on October 18, 2012 · LeaveaComment BBC News, 17 October 2012 — နိုင်ငံတကာ IT နည်းပညာ ကုမ္ပဏီ တခုဖြစ်တဲ့ ဂျပန် အခြေစိုက် NTT Com ကုမ္ပဏီ ဟာ ရန်ကုန်မှာ ရုံးခွဲတခု ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ က ဖွင့်လှစ် လိုက်ပါတယ်။
Category Selected News, Technology · Tags ကလေးကို သာမန်လူတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် ပြုစုပျိုးထောင်နည်း
Posted by mmnewshub on September 30, 2012 · LeaveaComment မောက္ခပညာရေးမဂ္ဂဇင်း . ၃၀ ၇က်နေ့ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၂ —- ဖခင်တစ်ဦးရဲ့ အသိပေးချက် ၁၈ ချက် (၁) သင့်မှာရှိတဲ့ အိပ်မက်တော်တော်များများကို သင်အကောင်အထည်ဖော်ဖြစ်ချင်မှ ဖော်ဖြစ်ခဲ့မယ်။ သင့်စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေ အကောင် အထည် ဖြစ်မြောက်ဖို့ ကလေးကိုအစားထိုး မခိုင်းစေပါနဲ့။ ဒါဟာ သင့်စိတ်ကူးအိပ်မက်ပါ… ကလေးရဲ့ စိတ်ကူးအိပ်မက် မဟုတ်ပါဘူး။
Category Selected News, Technology · Tags ဈေးကွက် အတွင်း ရောက်ရှိလာတော့မယ် iphone5 ရဲ့ အခြေအနေများ
Posted by mmnewshub on September 26, 2012 · LeaveaComment ရိုးရာလေး . ၂၅ရက်နေ့ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၂ —– ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း Apple ကုမ္ပဏီမှ နောက်ဆုံးမျိုးဆက် အဖြစ် မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ iPhone5 ကို စက်တင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့ မှာ စတင်ကြေငြာလိုက်ပြီး စက် တင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့မှာတော့ စတင်ရောင်းချပြီး ဂျပန်၊ စင်ကာပူ၊ အမေရိကန်၊ ဩစတြေးလျ၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမနီ၊ UK နိုင်ငံများမှာ စတင်ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။
Category Selected News, Technology · Tags နေအိမ်ခန်းအသွင်သုံးနိုင်မည့် ပေါင်တစ်သန်းကျော်တန် ဇိမ်ခံဘတ်စ်ကား
Posted by mmnewshub on September 23, 2012 · LeaveaComment မြန်မာ့သားကောင်း . ၂၃ရက်နေ့ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၂ —- နေအိမ်ခန်းတစ်ခုအသွင် အသုံးပြုနိုင်သော အဆင့်မြင့်နည်းပညာများ ပါဝင်သည့် Volkner Mobile Performance Bus ဟု အမည်ပေးထားသော ဇိမ်ခံဘတ်စ်ကားကြီး၏ တန်ဖိုးမှာ ပေါင်စတာလင် ၁ ဒသမ ၂ သန်းအထိပင်ရှိနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
Category Selected News, Technology · Tags အက်ပဲလ် နောက်ဆုံးထုတ်iPhone5စတင် ရောင်းချ
Posted by mmnewshub on September 22, 2012 · LeaveaComment BBC News, 21September 2012 —- အမေရိကန် နည်းပညာ ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ အက်ပဲလ် ကနေ သူတို့ရဲ့ နောက်ဆုံးထုတ် စမာ့တ်ဖုန်း ဖြစ်တဲ့ iPhone5ကို သောကြာနေ့မှာ စတင် ရောင်းချနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
Category Selected News, Technology · Tags မြန်မာပြည်က ကမ္ဘာ့ရှေးဟောင်း အမွေအနှစ် (အပိုင်း ၂)
Posted by mmnewshub on September 15, 2012 · LeaveaComment VOA News, 14September 2012 — (သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ) ဒီတပတ်တော့ ကမ္ဘာ့ရှေးဟောင်း အမွေအနှစ်အဖြစ် သတ်မှတ်ဖို့ ကုလသမဂ္ဂကို တင်သွင်းထားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက နေရာတွေထဲမှာ ပျူလက်ရာတွေရဲ့ထူးခြားမှုနဲ့ ဒီဒေသတွေကို ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်အဖြစ် ထားသင့်တယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရင် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အကျိုးအမြတ် ဘာတွေရလာနိုင်တယ်ဆိုတာတွေကို ပြောပြပါရစေ။
Category Selected News, Technology · Tags iPhone 5
Posted by mmnewshub on September 13, 2012 · LeaveaComment Internet Journal, 13September 2012 —- ဒီဇိုင်းပြင်ဆင်ထားပြီး ၄ လက်မအရွယ် Retina display ပါဝင်ကာ iPhone 4S ထက် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း ပိုမိုပေါ့ပါး သည့် ဆဋ္ဌမမြောက် မျိုးဆက် iPhone5ကို Apple ကုမ္ပဏီက တရားဝင် မိတ်ဆက်ကြေညာခဲ့သည်။
Category Selected News, Technology · Tags Apple ကုမ္ပဏီက iPHONE5တရားဝင် မိတ်ဆက်ပွဲထုတ်
Posted by mmnewshub on September 13, 2012 · LeaveaComment VOA News, 12September 2012 —- အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက သတင်းနည်းပညာ ဧရာမ ကုမ္မဏီကြီးဖြစ်တဲ့ ပန်းသီး (Apple) ကုမ္ပဏီ ဟာ အားလုံးက မျှော်လင့် စောင့်စားနေကြတဲ့ iPhone အမျိုးအစားသစ် လက်ကိုင်ဖုန်းဖြစ်တဲ့ iPhone5ကို စက်တင်ဘာ (၁၂)ရက်နေ့က စတင် မိတ်ဆက် ပွဲထုတ်လိုက်ပါပြီ။
Category Selected News, Technology · Tags 12» Recent Posts	” တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်များအရေး သမ္မတဦးသိန်းစိန် ပြောပိုင်ခွင့်မရှိဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဝေဖန် “